रेश मरहट्ठा, नायक - यात्रा सन्दर्भ - साप्ताहिक
रेश मरहट्ठा, नायक
भरखरै 'मेरो बेस्ट फ्रेण्ड' प्रदर्शन भएको छ। यसको प्रतिक्रियाले उत्साहित बनाएको छ।
अचेल चलचित्रमा कम देखिनु हुन्छ नि ?
राम्रो चलचित्रमा मात्र काम गर्ने भनेर बसेपछि संख्या घट्ने रहेछ। अहिले त्यस्तै भएको हो।
लामो समयपछि चलचित्रमा कमब्याक गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
रमाइलो लागिरहेको छ। दर्शकहरूले नयाँ चलचित्र कहिले आउँछ भनेर सोधिरहनु हुन्थ्यो, अहिले 'मेरो बेस्ट फ्रेण्ड' मार्फत म उहाँहरू माझ पुगिरहेको छु।
तपाईंको बेस्ट फ्रेण्डचाहिँ को हो नि ?
हामी कलेज पढ्दा हाम्रो ग्रुपको नाम 'बिज गाइज' थियो, जसमा जेसन, विन्डी, ब्रायन, साल्वा र टोनी जस्ता साथी थियौं। अहिलेसम्म पनि उनीहरू नै मेरा बेस्ट फ्रेण्ड हुन्।
मेरो बेस्ट फ्रेण्डमा काम गर्ने क्रममा कसैलाई बेस्ट फ्रेण्ड बनाउनु भएन ?
चलचित्रमा सँगै काम गर्ने कलाकार तथा प्राविधिकहरूसँग राम्रो दोस्ती भएको थियो। चलचित्र प्रदर्शन भएपछि चाहिँ दर्शकहरूलाई नै मेरो बेस्ट फ्रेण्ड मानिरहेको छु।
रोमान्टिक छविको तपाईंलाई एक्सन दृश्यमा कत्तिको रुचाइयो ?
म हेर्दा रोमान्टिक जस्तो देखिए पनि चलचित्रमा मलाई एक्सन नै मनपर्छ। दर्शकलाई पनि मेरो एक्सन मन परेको प्रतिक्रिया पाएको छु। चलचित्रमा मैले एक्सन दिएको दृश्यमा दर्शकदीर्घाबाट बज्ने तालीले मलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै चलचित्रमा काम गर्ने प्रेरणा मिलेको छ।
एक्सन भूमिका सजिलो कि रोमान्टिक ?
म 'मू-लिन-डू' मा ब्ल्याक बेल्ट भएकाले मलाई एक्सन नै सजिलो लाग्छ तर अहिले काम गर्दै जाँदा रोमान्स/सेन्टिमेन्ट पनि सजिलो लाग्न थालेको छ। कलाकारले हरेक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले अहिले म दुवै विधामा उत्तिकै सहज महसुस गर्दैछु।
कुन नायिकासँग अन-स्क्रिन रोमान्स गर्ने इच्छा छ ?
हलिउडकी नायिका लेगन फक्ससँग। उनी निकै हट नायिकाका रूपमा चिनिन्छिन्।
प्रियंका कार्कीसँगको अन-स्क्रिन रोमान्स कस्तो लाग्यो ?
प्रियंकासँग मैले केही म्युजिक भिडियो तथा फोटोसुट गरेको छु। अहिले मेरो बेस्ट फ्रेन्डमा प्रियंकासँगको जोडिले दर्शकको मन छोएको छ। यो चलचित्रको सफलताले आगामी दिनमा हाम्रो जोडी दोहोरिने सम्भावना छ। प्रियंका मेहनती भएकाले उनीसँग काम गर्न सजिलो छ।
आगामी दिनमा कस्ता चलचित्रमा देखिँदै हुनुहुन्छ ?
यतिबेला सिमोस सुनुवारको नयाँ चलचित्र 'मिसन पैसा टु' र मेरो आफ्नै 'च्यालेञ्ज' प्रदर्शनको तयारीमा छन्। त्यसबाहेक पछिल्लो एक वर्ष मैले कुनै पनि चलचित्र साइन गरेको छैन। अब भने पुन: अभिनयमा सक्रिय हुँदैछु।
फेसबुकमा कत्तिको समय बिताउनु हुन्छ ?
दिनमा २-४ पटक फेसबुक खोलिरहेकै हुन्छु। अनलाइनमा बस्ने बानी छैन, अफलाइन म्यासेज आयो भने रिप्लाई गर्छु।
तपाईंलाई हट लाग्ने नेपाली नायिकाहरू ?
प्रियंका कार्की र झरना बज्राचार्य
यो प्राकृतिक कुरा हो। प्राकृतिक भएकाले यसमा धेरै बहस गर्न आवश्यक मान्दिनँ।